DHABTA IYO DHALANTEEDKA HABKA FEDERAALKA
M. Dalmar | mdalmar@sympatico.ca
Dhalanteedka: Habka federaalku wuxuu kala googooynayaa dalka, wuxuuna lid ku yahay midnimada qaranka.
Dhabta: Federaalku ma kala googooynayo dalka. Bil caksi, federaalka waxaa loo arki karaa xal dhexdhexaad ah oo la isugu soo dumi karo gobollada iyo belaaha kala tagay ee Soomaaliyeed. Federaalku ma sameeyo dawlado kala gaar ah, balse wuxuu baahiyaa awoodda xukunka oo uu gaarsiiyaa gobollada iyo degmooyinka. Habka maamulka mideeysan (unitary) isaga qudhiisuu wuu baahiyaa awoodda. Farqiga labada u dhexeeyaa waxaa weeye, habka federaalka ah, baahinta awooddu waxay ku timaada heshiis, waxaana lagu qeexaa distuurka. Habka maamulka mideeysanse, baahinta awooddu waxay ku xiran tahay doorashada dawladda dhexe iyo hadba intii xilal ah ooy u wakiilato gobollada. Waxaa moodaa in federaalka lagu khaldayo habka konfederaalka oo ah mid ka kooban ah dawlado kala madax bannaan, haseyeeshee, wadaaga dano qaarkood sida lacagta, xeerka socdaalka iwm. Haddii dhabahaan loo qaato hadbka federaalka ah, waxaa dalka ka jiraya hal dawlad qaran oo keliya ah sida Maraykanka, Kanada iyo dalalka kale ee ku dhaqma habkaan. Waxaa intaas weheliya, habka federaalka waxaa loo jaangooyn karaa hadba sidii ugu habboon ee loogaga hirgelin karo Soomaaliya, waxaana lagu talagali karaa inuu tadawur qaadan karo isagoo la saanqaadaya duruufaha dalka.
Dhalanteedka: Federaalku wuxuu dhiirigalinaya qabiilka, maadaama gobolladu isu raacayaan hayb qabiil.
Dhabta: Siday degmooyinku isu oggol yihiin ama isu raacayaan kuma xirna habka la qaadanayo ee waxay ku xiran tahay garashada, kalsoonida iyo biseeylka bulshada. Qabiilku, sida la ogsoon yahay, waa dhaqan ku xidideeystay mujtamaca Soomaaliyeed oo ka facweeyn nidaamyadaan casriga ah sida federaalka, maamulka mideeysan iwm. Qabiilku waa kan hadda la go’aansaday in lagu saleeyo dhismaha dawladda cusub. Haddaba, la iskuma heli karo in qabiilka marna la dareensado marna la dugsado.
Dhalanteedka: haddii maamulka lagu baahiyo gobollada waxaa la gaaraya horumar.
Dhabta: Magac la qaatay laguma gaaro horumar. Horumarku kuma yimaado hab la qaatay oo keliya ee wuxuu u baahan yahay ficil dhab ah, dadaal dheeri ah iyo daacadnimo. Wuxuu u baahan yahy hoggaan toosan, maamul aan musumaasuq lahayn iyo qorshe cilmiyyesan oo ku wajahan horumarka dhaqaalaha iyo bulshada. Waxaa jira dawlado qaatay habka federaalka oo dib u dhacay iyo kuwa ku horumaray. Waxay isku dhaafeen waa tacab, tacliin iyo tashiil.
Dhalanteedka: Federaalku waa hab cusub oo aan weli la tijaabin, sidaas daraadeedna waxaa shaki ku jira dhaqangelintiisa.
Dhabta: Haddii dhabahaan loo darso, federaalku ma cusba. Waxaa la baahiyey awoodii maamulka ee hawlihii iyo adeegyadii waa isla kuwii. Haddaan mitaal u soo qadanno, dugsiyada waxaa awal laga maamuli jirey magaala-madaxda. Haddii federaal la qaato dugsiyadu waxay hoos imaanayaan gobollada. Marwalba hawlihii waxbarashadu waa isla kuwi. Haddii daacad laga yahay wax kasta waa la higelin karaa. Sida Ingriisku ku maahmaaho: Haddii niyadi jirto farsamo lama waayo. Teeda kale, hirgelinta habkaan waxaa lala kaashan karaa aqoonyahannada Soomaaliyeed oo tirada badan, iyo beesha caalamka oo taakuleeyn, iyo talabixin diyaar la ah. Waxaase la isweeydiin karaa, haddii aan hab cusub la tijaabin oon la baadigoobin, ma waxaa la rabaa in dib lagu noqdo hab-ku-sheeggii sababay masiibada manta taagan.
Dhalanteedka:. Haddii la qaato federaalka oo awoodda la baahiyo, waxaa laga badbaadi doonaa diktatooriyad.
Dhabta: Federaalka oo la qaataa damaanad uma aha in laga badbaado diktatooriyad. Diktatooriyadda waxaa laga badbaadi karaa markay jiraan hay’ado dawladeed oo rasmi ah oon maqaarsaar ahayn, sida garsoor madax bannaan, barlamaan awood leh, doorasho xor ah, saxaafad xor ah, sharci loo siman yahay iyo dadweeyne wacyi leh oo xisaabtamaya.
Faafin: SomaliTalk.com | July 21, 2003